बिहे पछि युवतीमा देखा पर्ने7परिवर्तन ! हेरेक पुरुषले जान्नु पर्ने, share गरौ – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /Intresting/बिहे पछि युवतीमा देखा पर्ने7परिवर्तन ! हेरेक पुरुषले जान्नु पर्ने, share गरौ
विवाहपछि युवतीहरु आफ्नो जन्म घर छाडेर नयाँ घरमा जान्छन् । उनिले विवाहसँग घर मात्रै परिवर्तन गरेका हुँदैनन् सम्बन्ध पनि परिवर्तन भएका हुन्छन् ।छोरीबाट बुहारी बनेका हुन्छन् । नयाँ परिवेशमा नयाँ चुनौतीको सामना गर्न परिरहेको हुन्छ । विवाहपछि महिलाहरुमा हरेक कुरामा परिवतर्न आउँछ । उनीहरुको सोचाइ, बोल्ने, शैली, खानपान रहनसहनदेखि हरेक कुराहरु बदलिंदै जान्छ ।
1. शरीरमा ला’परवाही
2=> कामको चाप
विवाह भन्दा पहिला घरमा सबै काम गर्ने युवती विवाह गरेपछि केही अल्छि हुन्छन् । उनीहरुको लागि विवाह गरेर गएको घरमा काम गर्ने मानिसको सहायता चाहिने समेत हुन जान्छ । विवाह पछि उनीहरुको ब्यस्तता पनि बढ्छ अनि ध्यानपनि अन्तै केन्द्रित हुन जान्छ ।
5=>नन्द जेठानीसँगको प्रतिस्पर्धा
6=>सुखी पत्नी र दुखी पति
हरेक युवतीले विवाहपछि गुनासो गर्छन् । विशेषगरि पतिसमक्ष उनीहरुको गुनासो हुन्छ । तपाई पहिलाको जस्तो हुनुहुन्न । फेरिनुभयो जस्तो शव्द उनीहरुको नि’यमित बन्न जान्छ । विवाह पछि पनि व्यक्ति वा पुरुष पहिलाको जस्तै कसरी रहन सक्छ र ? भन्ने चाहिँ उनीहरुले सोच्दैनन् । त्यस्तै पुरुषले पनि युवतीमाथि सोच्ने गर्छ । महिला र पुरुष दुवै स्वतन्त्र भएको बेलाको जस्तो हुँदैनन् ।
पारिवारिक झ’मेला, स’म्बन्ध र जिम्मेवारीले गर्दा सबै परिवर्तन हुन्छन् भन्ने दुबै पति र पत्नीले बुझ्ने हो भने स’मस्या नै पर्दैन । र दाम्पात्य जीवन सुखमय बन्नसक्छ।
सलमान खान प्रेमिकाको बेडरुममा रंगेहात पक्रिएपछि…